Archive du 20170309
7 maty, 6000 ireo traboina Mitaredretra ny Fanjakana
Nifamahofaho be ny toe-draharaha omaly hoe : andro iasana sa tsia iny andro nidiran�ny rivodoza teto afovoan-tany iny. Nazava ny fanapahan-kevitry ny Minisiteran�ny
Depiote Rakotomanjato Rodin � Ny vahoaka eny ifotony aloha �
Nasiam-panamboarana ny tetezana fampiasan�ny mponina ao amin�ny tapany atsinanan�ny kaominina Arivonimamo II.
Asehoy amin�izay e !
Aiza amin�izay ry Jean ilay fahaizanareo tamin�ny andron�ny frankofonia ireny a ! Hainareo ery ny nifaninana tamin�ilay nahary ka nanakana ny orana tokony hirotsaka mba tsy hanimba ny rendrarendranareo mianakavy.
Lalao Ravalomanana �Miantoka ny fampandrosoana ny vehivavy�
Nanao hafatra manokana miantefa amin�ny vehivavy mpiray tanindrazana ny Ben�ny tan�nan�Antananarivo, Lalao Ravalomanana noho ny 8 marsa na tsy afaka nankalaza izany toy ny fanao isan-taona aza, noho ny andro ratsy.
Fankalazana ny 8 marsa Naresaka tao Mahajanga
Nanamarika ny fankalazana ny Andron' ny vehivavy ny tany amin'ny faritra Boeny na dia nandeha aza ny resaka sy fisalasalana ny amin'ny mety hanajanonana izany noho ny toetry ny andro sy ny toe-draharaha miseho eto amin' ny firenena manjo ny mpiray tanindrazana.
Mpivarotra voasoloky eny Ankatso Tsy afa-po tamin�ny didim-pitsarana
Nivoaka ny alatsinainy teo ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha nampifanolana ny mpivarotra eny Ankatso mivondrona ao anatin�ny TAM (Tsenan�Ambohitsaina Miray).
Kaominina Andoharanofotsy Nandaitra ny fanentanana ny mponina
Tsy nahitana rano niandrona mihitsy ny araben�Andoharanofotsy omaly tontolo andro na dia nirotsaka tsy ato aza ny orana teto an-drenivohitra sy ny manodidina.
Anosy sy ny manodidina Nianjera ny takelaby, sahirana tamin�ny rano ny fiara
Dibo-drano ny arabe tetsy Anosy sy ny manodidina omaly maraina vokatry ny ora-nikija tsy niato teto an-drenivohitra. Sahirana ny fiara vokatr�izany raha betsaka ihany koa ireo trano teny amin�ny manodidina no tafiditra ny rano ka voatery nitady vahaolana ny tompony.
Mandrora mitsilany !
Mandalo vanim-potoana sarotra tanteraka ny firenena amin�izao fotoana izao. Ny hanin-kohanina tsy ampy satria ratsy ny vokatra tamin�ity noho ny haintany navaivay tao anatin�ny volana maro. Izao indray mamely mafy ny rivodoza ka ny 80%-n�ny velaran�i Madagasikara no mibaby ny voka-dratsiny.
DREN Analamanga Tsy mianatra ny mpianatra anio 9 marsa
Nahazo fanairana loko mena ny faritanin�Antananarivo, misy faritra efatra dia Analamanga, Vakinankaratra, Bongolava ary Itasy.
Tahirimbola iraisam-pirenena Mitsirika ny fahasalaman'ny toekarena Malagasy
Eto Madagasika nanomboka ny 7 marsa teo indray ny iraky ny FMI (Fonds Monetaire International) tarihan'i Marshal Mills. Fitsidihana arahina asa haharitra roa herinandro hijeren'ny delegasionina avy amin'ny Tahirimbola iraisam-pirenena ny fahasalaman'ny toekarena Malagasy amin'ny ankapobeny.
Salon des Etudes Internationales Nitarina hatramin�ny rahampitso zoma
Raha tokony hifarana anio Alakamisy ilay �Salon des Etudes Internationales� andiany faha-8, karakarain�ny Madajeune etsy amin�ny Carlton Anosy dia rahampitso zoma izany vao hifarana amim-pomba �fisialy.